Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): April 2011
Burmese mortar shell falls in KIA area
at 4/30/2011 09:39:00 AM
A Burmese Army mortar shell landed Wednesday, April 27, in the controlled area of the Kachin Independence Army (KIA) in Hukawng Valley, in northern Kachin State, KIA sources said.
The shell fell in the territory of the KIA’s Battalion No. 14, based in Nambyu Village, near Kawng Ra village, on the Stilwell Road (or Ledo Road), near Danai (Tanai). No casualties have been reported, KIA officials said.
More news+++Kachin news+++
Shaachyoi hpa
at 4/27/2011 09:40:00 AM
Manau poi hta gam chyam No. 1 kumhpa. Ndai zawn Manau poi hta Magwi jaw ai gaw Hugawng pa hta (2) lang rai sai.
at 4/12/2011 11:18:00 AM
ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းမြို့နယ်၊ ဟူးကောင်းတွင် ယခုနှစ် ကချင်ရိုးရာ နှီးနောဖလှယ်ပွဲတွင် အသစ်အဆန်းအနေဖြင့် ကံစမ်းမဲ ဖောက်သည့်အစီစဉ်များပြုလုပ်ရာ ပေါက်မဲများကို ဆင် (သို့) သိန်း ၁၅၀ ဖောက်ပေးနေသည်။
ကံစမ်းမဲ ပထမဆု အဖြစ် ဆင် (သို့မဟုတ်) သိန်း ၁၅၀ကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲ ပေါက်သူသည် ဆင်ကို ရွေးချယ်သွားခဲ့သည်ဟု ပွဲတော်တက်ရောက်ခဲ့သည့် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ကချင်ရိုးရာ ဗဟိုကော်မတီဝင် တစ်ဦးမှ ပြောသည်။
“ဒါက ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံး လုပ်လိုက်တာပဲ၊ ဆင်က ငယ်သေးတယ်၊ ဆင်စွယ် မရှိသေးဘူး၊ ဆင်မကြိုက်ရင်တော့ သိန်း ၁၅၀ ပေးမယ်ပေ့ါ၊ ဆင်က တော်တော်ကြီးတယ်။”
မြန်မာစစ်သားများ၏ စောင့်ကြည့်မှုအောက်ကနေ ယခုလို ဟူးကောင်း ကချင်မနောပွဲတော်ကို ကျင်းပခဲ့ရသည်။ ဓါတ်ပုံ-ကချင်သတင်းဌာန
ဆင်ကံစမ်းမဲအား စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ၊ တရိုကျေးရွာသစ်မှ ဦးထွန်းဆိုသူ ရရှိသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၂၀၀၀ ပေးရသော ကံစမ်းမဲအစောင် ၁၀၀ ကျပ်ငွေ ၂ သိန်းအကုန်အကျဖြင့် ဝယ်ယူထိုးခဲ့ရာ မဲနံပါတ် ၉ သောင်း ဖြင့် ပေါက်သွားခဲ့ကြောင်း တနိုင်းမနောဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင်များမှသိရသည်။
မဲပေါက်သည့် ဦးထွန်းက မနောဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီထံမှ ဆင်ကို ရယူခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ အိမ်သို့ သယ်ယူရန် ခရီးဝေးသဖြင့် ဆင်ကို သိန်း ၁၂၀ နှင့် ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ကြောင်း ၎င်းကော်မတီဝင်မှ ပြောသည်။
ယင်း ဟူးကောင်း ကချင်ရိုးရာမနောပွဲတော်ကို ဧပြီ ၄ ရက်နေ့ မှ ၇ရက်နေ့ အထိ စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲ့ပြီး မနောပွဲတော် က ရာတွင် နာဂ၊ ရှမ်း၊ အိန္ဒိယ ကချင် စသည့် လူထုပရိသတ် ၅၀၀ခန့် တက်ရောက် ပါဝင်ကခဲ့ကြသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းသည် ဆင်အသုံးများဆုံးနေရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးလည်း ခက်ခဲသောကြောင့် ဆင်ဖြင့်သာ ကုန်တင်၊ သစ်ဆွဲ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။
“ရွှေမှော်မှာက ကားလမ်းသွားလို့မရဘူး၊ ကုန်တွေက လူမလို့ မရဘူး၊ စက်ကြီး၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီပုံးကြီးတွေကို ဆင်နဲ့ပဲ တစ်မိုင်၊ နှစ်မိုင် အခကြေးယူပြီး ဆွဲနေကြရတာ၊ ဒီမှာက ဆင်မရှိမဖြစ်ပဲ” ဟု ဟူးကောင်း ဒေသခံတစ်ဦး ပြောသည်။
ဆင် တစ်ကောင် ငှားရမ်းခ တစ်လကို ကျပ် သိန်း (၃၀) ခန့် ပေးရပြီး တစ်နေ့ ငှားရမ်းယူလျှင် ကျပ်ငွေ (၁) သိန်း ပေးရကြောင်း ဒေသခံမှ ပြောသည်။
ကချင်ရိုးရာ မနောပွဲတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကံစမ်းမဲကို သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ ကာရာအိုကေ အောက်စက် စသည်ဖြင့် ကံစမ်းမဲ ဖောက်လေ့ရှိရာ ယခုနှစ်မနောပွဲတော်တွင်မူ ဆင် ကံစမ်းမဲ ဖောက်နိုင်သည့် အတွက် ကချင်လူထုတစ်ရပ်လုံး ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွား ကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေကြသည်။
ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်ရောင်း ကော်မတီခွဲမှ ၎င်းတို့၏ ခရီးစရိတ်၊ အသုံးစရိတ်များ နှုတ်ယူပြီး လက်ကျန်ငွေ လက်မှတ်ဖိုး ကျပ်ငွေ သိန်း (၁၄၀)ကို မနောဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီသို့ အပ်နှံခဲ့သည် ဟုပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရသစ်မှလည်း ၎င်းပွဲအတွက် လှူဒါန်းသည့်် (၁၄၈) သိန်း ကို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးကမန်းဒူနော်နှင့် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဒေါ်ဖောင်ရမ်ဘောက်ဂျာတို့ တက်ရောက်လွဲအပ်ခဲ့သည်။
မနောပွဲ တစ်ကြိမ် ကျင်းပလျှင် ကျပ်ငွေ သိန်း ၂၀၀၀ ကျော် ကုန်ကျလေ့ရှိပြီး ၂၀၀၁ခုနှစ် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မနောပွဲတော်တွင်မူ ကျပ်သိန်း ၃၀၀၀ ကျော် ကုန်ကျခံကာ ပွဲတော် စည်းကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
ယခုနှစ် ဟူးကောင်း မနောပွဲတော်တွင်မူ ကျပ်ငွေ သိန်း ၁၀၀၀ ကျော် ကုန်ကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မကခ)မှ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇေယျာအောင်၏ ညွန်ကြားချက်အရ မနောဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီမှ ငွေ ကျပ် သိန်း ၃၀၀ လှူဒါန်းကာ ကချင်လောပန်း ယွပ် ဇော်ခေါင် (Yup Zau Hkawng) မှ ကျပ်ငွေ သိန်း ၁၀၀ နှင့် နွားနှစ်ကောင် ပေးလှူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မနောကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ သိရသည်။
ဒေသခံ အသီးသီးမှလည်း ငွေသား၊ နွား အစရှိသည်တို့ ထည့်လှူခဲ့သည်ဟု မနောဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီမှ ပြောသည်။
ဟူးကောင်းတွင် ကျင်းပသော မနောပွဲတော်ကို တနိုင်း မနောဖြစ်မြောက်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ ကဆုတ်ဆင်ဝါး၊ တနိုင်း ကချင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မကော့တူးခေါင်တို့မှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မနောပွဲတော်များကို ကချင်တိုင်းရင်းသားမနောကော်မတီဝင်များကသာ ဦးဆောင်ကျင်းပပေးလေ့ရှိပြီး ကျသင့်ငွေများကို လူထုထဲမှ သူဌေးများနှင့် ကေအိုင်အိုက အဓိကပေးလှူ ထောက်ပံပေးခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုနှစ်မှစ၍ ပွဲတော်များကို အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီများက ဦးဆောင်ကျင်းပရာ လူထုသူဌေးများထံမှ မထည့်မနေရနှင့်သော်လည်းကောင်း သိန်းပေါင်းများစွာကောက်ခံကာ ပိုပိုလျှံလျှံသုံးစွဲခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
Myu shamyit Masing Hpe myen gaw laja lana Shamyit Nga sAi
at 4/06/2011 10:47:00 AM
Dai ni ya hkyak hkyak Buga na ni shana wa ai shi ga gaw grai myit npyaw hpa lam nan re law,
Jinghpaw wunpawng myu sha ni hpe katsi majan gahtet majan ,sut hpaga majan,hpaji ji majan,Majan sum hpa hte gasat shamyit nga sai re,
Myen asuya ning nan gaw Jing hpaw ni hpe lawan shamyit na lam ndai shata kawn hpang wa sai lam chye lu ai,
Kani hte nang hpam lu sha kasti majan hte wang lu wang lang dut shabra nna jahten ai lam an hte yawng chye lu sai re.
Ya ndai shata kawn hpang wa ai masing gaw Jawng lung nga ai ma ni,lam ntsa hkan hkawm nga ai ma asak 8 ning,9 ning re kawn hkawt dai ma kasha ni hpe rim la nna sai lam de tsi samyit hte kani hpraw ,nang hpam htu bang ya ai lam chye lu ai,Tsi htu bang da nna nam sumwum hkan shayup tawn da ai lam chye lu ai,Kade nna yang jinghpaw mung dawedut ai manialusha hkan kani dat bang nna dut shabra na lam mung chye lu ai,
ndai hte seng nna atsawm naw sagawn yu ga,Gara shara kaw kadai hpe kaning di ai sak se hte hkrak kade nna yang lu shagawn wa sana re,
Ti nangakashu kasha ni hpe myi npu na hkum shadam kau atsawm yu reng na hku di ga.
Grai sadi ra ai madang de du wa sai lam chye lu ai.
at 4/05/2011 11:10:00 AM
Hpa-ga lam H te Gasat Shamyit Nga Ai
at 4/03/2011 11:59:00 PM
Myen hpyen asuya gaw amyu jinghpaw wunpawng ni hpe lak nak ni hte shaning 50 ning gasat shamit wa yu tim awng dang wa ai lam nnga ai majaw hpaga hpe lak nak shatai nna bai gasat shamit taw nga sai. 1991 ning hpang daw kaw nna my u sha gum lang hpung ni hpe hpyen n’gun h te gasat shamit ai hpe shayawm kau wa nna hpa-ga gat lawk hte mung masa hpe bai galaw wa masai.
1994 ning kaw nna hpa-ga mung masa hpe ta tut galaw hpang wa masai. My sha Lak nak lang gumlang hpung ni hpe gasat jahkring jang hpa-ga galaw na lam hta wang lu wang lang galaw lu ai ahkaw ahkang jaw na ngu nna hkalem dat masai. Gumlang hpung law malawng hpe mung dai hpa-ga mung masa mahkam hta hkalem bang dat lu manu ai, dai hta amyu wunpawng gumlang hpung ni mung lawm mat wa saga ai. N’nan daw hta ahkaw ahkang ni hpe sharen da jaw nhtawm le h te le bai magra shagyip la kau ya mat wa sai re. Tinang my u sha mungdaw lamu ga ni hta pru taw nga ai nhprang rai ni hpe tinang mung madaw masha ni madu galaw sha lu nmai hpe mungdanaup-hkang tara hta ka bang masat kau ya nga masai re.
Myen hpyen asuya gaw hpa-ga mung masa hku gasat ai hta, gum hpraw kaba pru wa lu ai ahkyak kaba n’hprang rai ni pru ai lamu ga gin-ra ni hpe n’ gasat ai sha hpa-ga gat lawk mying h te hkan zing madu la kau ya masai. Zing madu la kau ya sai madung n’hprangarai ni 1) lungseng maw h te ja maw ginra ni , 2) Hpun maling mala tu ai ginra ni, 3) Mali hka, N’mai hka hta htoi wan galaw dut sha na galaw nga ding yang, 4) Hugawng ginra lamu ga ni hpe zing la ya nga ding yang ndai hugawng ginra zing la ai madung gaw ga kataedak rawng taw nga ai wan sau the kaga nhprang arai ni hpe htu shaw dut sha na matu re, 5) Pa-tau hkyem bum gin ra ni hpe zing madu la wa hpang wa masai, ndai hkyen bum ginra ni de sa wam hkawm chyai na maigan bu hkawm masha ni kaw na gum hpraw hta sha lu na matu mahkyen galaw taw nga ai lam ni re, hta n’ga na pru ai nhprang rai ni hpe htu shaw dut sha mat wa na hpe madung tawn yaw shada ai lam rai nga malu ai. Ndai manu dan n’hprang rai pru ai lamu ga ni ma hkra hpe n’gasat ai sha apyaw h te zing madu la kau ya lu ai lam ni gaw myen hpyen wa hpa-ga mung masa hku nna anhte myu sha ni hpe gasat awngdang la lu wa nga ai lam nre ni?
Lamu ga madu, buga masha amyu jinghpaw wunpawn ni wa, tinangalamu ga ni hta tinang kam ai hku nmai galaw sha wa nga saga ai le, mai gan chyasam waamadaw she kam mara re tara ni sa matsun jahkrat kau ya, shan h teabungli nchyang she htam galaw wa ra nga sai le..mai gan jasam wa hpe madaw she hkrit hkung ga nga ra saga ai le…!
Ya democracy ngu ai myen hpyen jau bu ni magara jum da ai hkrang shaje na hpyen asuyaaprat hta mung, up-hkang daru magam lu ai ni h te shanh te hpe kat-hpa lu ai sahti hpa-ga masha ni sha bai hpa-lam ni ma hkra hta tek jum galaw sha mat wa na re gaw asan sha rai nga sai. Grau nna gaw sut hpa-ga lam hta dam lada ai hku nchye galaw sha lu shi ai anhte amyu jinghpaw wunpawng sha ni matu gaw ndai hpyen democracy asuyaaprat hta mung hpa-ga, sut masa lam h te nga pra lam ni hta grai wa mi lak lai wa na re ngu kam nmai nga ai. Myen hpyen asuya hkrang gran galaw nga ai mungdaw h te buga gaw sharawt lam ni gaw buga masha ni matu galu kaba lam nga wa masa nnga ai hta n’ga shanhte galaw na masing ni gaw buga masha nianga pra lam ni hpe grau she sharu shayak byin wa shangun na lam rai nga ai.
Dai majaw hpaga hpyen hku nna maden wa ai, ka-up madu galaw sha wa na, n’tara ai hku akyu amyat ni hpe htuk galaw sha mat wa na masing, bungli ni kaw na lawt lu na matu, buga mung masha ni hpe up-hkang nga ai seg ang ai up-hkang dap ni, buga hpung masha ni hpe woi awn nga ai hpung woi ni h te gumhpraw lu hpa-ga galaw taw nga ai ni kawn madung dat woi galaw ra sai. Ga shadawn;
- Ti-nangalamu ga de shang madu galaw sha taw nga ai mai gan hpa-ga company ni, hpa-ga masha ni hpe ti nangabuga masa ni matu akyu nnga na lam rai yang tsep kawp hkum pat kau ya ra ai h te ahkawn hta la nna buga masha niagalu kaba lam hta jai lang kau na,
- Buga hkai mu masha niagalaw sha lam ladat, hpa-ga lam ni hpe lam lada wa na matu mahkrun tam garum ya ra ai,
- Ti nangabuga lamu ga na nhprang rai ni hpe tinang buga masha ni nan grau nna galaw sha lu hkra h te mai gan hpa-ga hpung niaka-up galaw sha mat wa na lam ni kaw lawt lu lam ni hpe tau hkrau shajin da ai lam ni galaw ra ai.
Maran Zau Hkum
Hugawng mu hti hkrup ai Karai
at 4/03/2011 12:36:00 PM
Bishop Spong (Newwark, USA) gaw 'a terrible text' ngu ai chyum laikaahkrit shangun ai, mau shangun ai, sat shangun ai, lawt shangun ai, dang shangun ai hte sum shangun ai lam ma hkra hpe Karai Kasang lajang ai lam re nga nna, Karai Kasang hte hku hkau ai masha nkau mi gaw nhku hkau ai law lawantsa sara galaw ai lam re nga nna htawng madun dan nga ai nga nna mau ai ga tsun nga ai. Dai hte maren, Chyum Laika sharin la ai ni gaw n sharin la ai ni hpe shadum jahprang let shantheantsa kaw nga nga ma ai. Hkaw tsun dan let up mung up hkang nga ai. Tinang nan nlu hkan tim masha kaga wa hpe hkan shangun nga ai. Tinang ndang di tim kaga wa hpe galaw na shadut nga ai.
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲနှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အမည်စာရင်း ကြေညာ
at 4/01/2011 10:12:00 AM
ဝန်ကြီးချုပ် - ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း
ဝန်ကြီးများ - ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းအောင်၊ ဦးညွန့်အောင်၊ ဦးဘီထောဇောင်း၊
ဦးအလေးပါး၊ ဦးကမန်းဒူနော်၊ ဦးအောင်နိုင်၊ ဦးစိုင်းမောင်ရွှေ၊
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး- ဦးပါ(ခ)ဦးခင်မောင်ဆွေ(ဗမာ)၊ ဦးအားဆီ
ဥပဒေချုပ် - ဒေါ်မေရီမီနန်
Manau poi hta gam chyam No. 1 kumhpa. Ndai zawn Ma...
Myu shamyit Masing Hpe myen gaw laja lana Shamyi...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲနှင့် တပ်မတေ...